အိမ်သားအချင်းချင်းမသင့်မြတ် ဖြစ်နေပြီး ဝင်သမျှ ငွေတွေ ပြန်ထွက်နေသူများအတွက် – Zartiman
အိမ်သားအချင်းချင်းမသင့်မြတ် ဖြစ်နေပြီး ဝင်သမျှ ငွေတွေ ပြန်ထွက်နေသူများအတွက်
Zar Ti Man | December 15, 2020 | Knowledge | No Comments
နံနက်၆နာရီတွင် ဖြစ်စေ ညနေ ၆နာရီတွင် ဖြစ်စေ လှူ ဒါန်း ပါ ။ အမွှေးတိုင် ၃တိုင်နှင့် ဖယောင်းတိုင် ၁တိုင်ကို အိမ်ရှေ့တံခါးဝ တွင်ဖြစ် စေ အိမ်ရှေ့ဝရံတာ တွင်ဖြစ်စေ ခုံအမြင့်လေး တစ်လုံးနှင့် ထွန်းညှိ ပါ။အိမ်စောင့်နတ် ခြံစောင့်နတ် မြို့စောင့်နတ်များနှင့် အိမ်ခြံ အ တွင်းမှီတင်းစောင့်ရှောက်နေထိုင်ကြသော မြင်ပ် မမြင်အပ် သတ္တဝါများ ဘုရား မီးပူဇော်ရန် အလင်းတိုင် အမွှေးတိုင်များ လှူဒါန်း ပါ သည် ။ဤ အိမ် ဤခြံတွင်နေထိုင် သူများအားလည်း စောင့်ရှောက်ပါ ။ စီးပွားတိုးတက်ရန် ကူညီပါ စသည်ဖြင့် ပြောဆို နိုင် ပါ သည် ။
နံနက် မိုးလင်းသည်နှင့် ပရိတ်တရားတော်များ အိမ်တွင် ဖွင့်ပါ ။ အိမ်ဘုရားကို ဆွမ်း ရေချမ်း သောက်တော်ရေ. ကော်ဖီ မုန့် သစ်သီးစ သည့် လှူဒါန်းဖွယ် ရာများ အဆင်ပြေရာ လှူဒါန်း ပါ ။အိမ်ရှိ အိမ်သားများ အားလုံး နံနက်မိုးလင်းလျင် ဘုရားရှိခိုး ဖြစ်အောင် ရှိ ခိုး ခိုင်းပါ ။ ရက် ပိုင်း အ တွင်း သိသာစွာ အိမ် တွင် လာဘ် ပွင့် ၍ စိတ် ချမ်း သာ ပျော် ရွှင် ရ ပါ လိမ့် မည် ။အချိူ့သော အိမ်တွေဟာ အိမ်သား အ ချင်းချင်း မသင့်မြတ်တာ /ငွေဝင်သမျှအကြောင်း ရှာပြီး ကုန်ကျနေတာ /အိမ်သားတွေ ကျန်းမာရေးမကောင်းတာ စသည်ဖြင့် တစ်မျိူး ပြီး တစ်မျိူးဖြစ်ပြီး အိမ်ပူ ၍ စီးပွားမတက်ဖြစ်နေ တတ် ပါ တယ် ။ အထက်ပါ အစီ အရင် များကို ပြု လုပ် ပါ။မုချအဆင်ပြေသွားပါ လိမ့်မယ်။
နံနကျ၆နာရီတှငျ ဖွဈစေ ညနေ ၆နာရီတှငျ ဖွဈစေ လှူ ဒါနျး ပါ ။ အမှေးတိုငျ ၃တိုငျနှငျ့ ဖယောငျးတိုငျ ၁တိုငျကို အိမျရှတေံ့ခါးဝ တှငျဖွဈ စေ အိမျရှဝေ့ရံတာ တှငျဖွဈစေ ခုံအမွငျ့လေး တဈလုံးနှငျ့ ထှနျးညှိ ပါ။အိမျစောငျ့နတျ ခွံစောငျ့နတျ မွို့စောငျ့နတျမြားနှငျ့ အိမျခွံ အ တှငျးမှီတငျးစောငျ့ရှောကျနထေိုငျကွသော မွငျပျ မမွငျအပျ သတ်တဝါမြား ဘုရား မီးပူဇျောရနျ အလငျးတိုငျ အမှေးတိုငျမြား လှူဒါနျး ပါ သညျ ။ဤ အိမျ ဤခွံတှငျနထေိုငျ သူမြားအားလညျး စောငျ့ရှောကျပါ ။ စီးပှားတိုးတကျရနျ ကူညီပါ စသညျဖွငျ့ ပွောဆို နိုငျ ပါ သညျ ။
နံနကျ မိုးလငျးသညျနှငျ့ ပရိတျတရားတျောမြား အိမျတှငျ ဖှငျ့ပါ ။ အိမျဘုရားကို ဆှမျး ရခေမျြး သောကျတျောရေ. ကျောဖီ မုနျ့ သဈသီးစ သညျ့ လှူဒါနျးဖှယျ ရာမြား အဆငျပွရော လှူဒါနျး ပါ ။အိမျရှိ အိမျသားမြား အားလုံး နံနကျမိုးလငျးလငျြ ဘုရားရှိခိုး ဖွဈအောငျ ရှိ ခိုး ခိုငျးပါ ။ ရကျ ပိုငျး အ တှငျး သိသာစှာ အိမျ တှငျ လာဘျ ပှငျ့ ၍ စိတျ ခမျြး သာ ပြျော ရှငျ ရ ပါ လိမျ့ မညျ ။အခြိူ့သော အိမျတှဟော အိမျသား အ ခငျြးခငျြး မသငျ့မွတျတာ /ငှဝေငျသမြှအကွောငျး ရှာပွီး ကုနျကနြတော /အိမျသားတှေ ကနျြးမာရေးမကောငျးတာ စသညျဖွငျ့ တဈမြိူး ပွီး တဈမြိူးဖွဈပွီး အိမျပူ ၍ စီးပှားမတကျဖွဈနေ တတျ ပါ တယျ ။ အထကျပါ အစီ အရငျ မြားကို ပွု လုပျ ပါ။မုခအြဆငျပွသှေားပါ လိမျ့မယျ။